DAAWO: Shariif Sh Axmed oo ka digay ficilada DFS, kuna dhawaaqay in Dastuurkii dalka meel layska dhigay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlaya hadda munaasabada Caleema-Saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in ficilada madaxda dawladda Faderaalka ay yihiin kuwa halis galinaya midnimada dalka.
Shariif Sheekh Axmed wuxuu sheegay in meel fog laga keenay dalkan oo uu kasoo gudbay dagaalo sokeeye oo foolxun, qofkii joogayna uu xasuusanayo sidii dalku uu xaaladiisu ahayd waqtigaas.
Shariif ayaa sheegay in gabi ahaanba madaxda dawladda Faderaalka ee hadda ay laaleen dastuurka dalkan oo aan la aqoon meel ay geeyeen, wuxuu sheegay in ay waajib tahay in dib loo soo celiyo Dastuurkii dalka.
Inta uusan sannadkan dhammaan ayuu sheegay in ay waajib tahay in al yaqaano hanaan doorashada 2021-ka ay noqonayso, isagoo sheegay in wixii aan heshiis lagu heyn ay halis galin karaan dawladnimada dalka.
Hogaamiyaasha Siyaasadda oo ay ugu horeeyaan Puntland & Jubbaland ayuu ugu baaqay in ay dhigaan gogol dhameystiran si looga tashado xaaladdaha dalku uu waqtigan marayo.